no nilazany fa efa nitsara basikety 5x5 iraisam-pirenena sokajy seniors lahy sy vavy ary sokajy junior hatramin’ny volana aogositra 2014 ny tenany amin’ny maha mpitsara FIBA (Fédération Internationale de Basket) azy. Tamin’ny volana martsa 2020 aho, hoy izy, no nahazo ny “licence FIBA 3x3” niaraka tamin’ireo namako 5 hafa aty Afrika ka 2 izahay no avy aty Madagasikara tamin’izany dia izaho sy i Tojo. Izaho izany hatreto no mpitsara tanora indrina aty Afrika sy Eorapa nahazo an’io “doube certification FIBA” io. Marihako, hoy hatrany i Yann Davidson, fa ny basikety 3x3 dia tafiditra ho anisan’ireo taranjam-panatanjahantena hifaninanana any amin’ny lalao olimpika Tokyo 2020 izay voatery nahemotra amin’ny taona 2021 noho ny Covid-19. Tany Toamasina sy Morondava toerana niavian’ireo raiamandreniko no niveivezko nandratoana fianarana teto Madagasikara ary tamin’ny taona 2004 aho no lasa nianatra tany Toulouse France ka nahazo ny bakalorea sy ny Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives). Tamin’ny fahatongavako tany Toulouse no nanombohako nikotrana lalao basikety. Hafatra mba tiako hampitaina amin’ireo tanora Malagasy namako, hoy izy, dia ny famporisihana hiasa mafy tsy tapaka isan’andro eo amin’ny zavatra atao ka hibanjina mandrakariva ny tanjona tiana ho tratrarina ka hahay hanitsy ny lesoka natao fa tsy ho kivikivy izany mihitsy satria tsy hahazo fahombiazana izany mihitsy ianao raha tsy mahay manitsy an’izany lesoka sy tsy fahombiazana nihatra izany.